Fitazonana an-tsokosoko :: Tovolahy migadra noho ny fanafenany ny sakaizany • AoRaha
Natolotra teo anoloan’ny Fampanoavana, avy eo naiditra am-ponja vonjimaika any Toliara, tamin’ny alatsinainy lasa teo, ny tovolahy iray, 16 taona. Fitazonana sy fanafenana ankizivavy iray, 14 taona, voalaza fa sakaizany no vesatra anenjehana an’ity tovolahy ity.
Eo am-pikarohana ny olona iray hafa niray tsikombakomba taminy tamin’izao raharaha izao ny polisy any Toliara.
Nanatona ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona (DPMPM) any Toliara ny ray aman-drenin’ilay zazavavy, 14 taona, noho ny tsy fahitana ny zanak’izy ireo, nandritra ny efatra andro. Tamin’ny fakàna am-bavany an’ireo fianakaviana ireo no nahalalana fa manana sakaiza io ankizivavy io. Niantefa tany amin’iry tovolahy ny ahiahy, taorian’izay.
“Nandefasana polisy tany an-tranon’ny sakaizan’ ilay zazavavy. Tsy nisy olona tao saingy nahenoana feon’olona miantso vonjy. Voatery niditra haingana tao amin’ny trano ny polisy. Hita tao amin’ny larimoara fametrahana lamba ilay zazavavy nokarohina. Nosamborina ny tovolahy sakaizany”, hoy ny tatitra avy amin’ny polisy mpanao famotorana eo anivon’ny DPMPM any Toliara.
Tamin’ny famotorana an’io tovolahy voasambotra io no nahafantarana fa noho ny tsy naha teo ny zokiny, izay miara-mipetraka aminy, no nahatonga azy nitondra ny sakaizany tao an-trano. Niafara tamin’ny hevi-dratsy izany ka nohidiany tao anaty larimoara io sakaizany io, rehefa mivoaka any ivelany izy.
Fiarovan’ny covid-19 :: Mahomby ny ady amin’ny valanaretina any Fianarantsoa
Herisetra ara-nofo :: Lehilahy tratram-badiny nanolana zazavavy